I-Instapage: Isixazululo Sakho Sekhasi Lakho Lokungena Ku-One-In-One | Martech Zone
I-Instapage: Isixazululo sakho se-All-In-One PPC ne-Ad Campaign Landing Page
NgoLwesibili, Novemba 3, 2020 NgoLwesibili, Novemba 3, 2020 Douglas Karr
Njengomkhangisi, umnyombo wemizamo yethu uzama ukuthi izinhlelo zokuthengisa, ukumaketha, nezokukhangisa esizithathile ukuhambisa amathemba ethu ohambweni lwamakhasimende. Amakhasimende alindelekile cishe awalokothi alandele indlela ehlanzekile ngokuguqulwa, noma kunjalo, noma ngabe isimanga sikhulu kanjani.
Uma kukhulunywa ngokukhangisa, noma kunjalo, izindleko zokutholwa zingabiza impela… ngakho-ke siyethemba ukuzicindezela ukuze sikwazi ukubona nokuthuthukisa imiphumela yethu yomkhankaso. A ipulatifomu lekhasi lokufika kuvame ukufakwa kulokhu. Nazi izinzuzo ezi-5:
Izinzuzo Zekhasi Lokufika
Isimangalo - ngokugcina amakhasi okufika kude nezinye izindlela zokuguqula, singathola ukuqonda okucacile ngokubuya kwethu ekutshalweni kwezimali.
Ukuziphatha - ngokunciphisa ukubandakanyeka nezinye izinsizakusebenza, sinciphisa izinketho nezenzo amathemba ethu azenzayo, siqinisekisa ukuthi maningi amathuba okuguqula kunokuphequlula.
Ilula - ngokwakha amakhasi amahle wokufika, asheshayo, futhi alula, sandisa amathuba okuthi isivakashi sizoguqula, noma ngabe siphi isisetshenziswa.
Ukuphathwa koPhambili - ikhono lokuqinisekisa kalula, ukugcina, ukuhambisa, umzila, nokuphendula kumikhombandlela njengoba begcwalisa amafomu okubhalisa.
Testing - ngokusebenzisa ipulatifomu efaka izindlela zokuhlola, singafaka izihloko zezindaba ezahlukahlukene, okuqukethwe, izinkambu zefomu, nemiklamo ekhulisa amazinga wokuguqulwa ngokwezibalo.
Isibonelo sekhasi lokufika
Qaphela ezinye izici ezibalulekile zekhasi elilula lokufika ngezansi - ukuzulazula okuncishisiwe, izinto ezinamandla eziphikisayo, ukubizelwa esenzweni okukodwa, isihloko, ukubuka konke, namaphoyinti ezinhlamvu… konke okushayela umsebenzisi ukuguqula:
Ipulatifomu lekhasi le-Instapage Landing
Nansi isingeniso sevidiyo nokubuka konke kwe- Ipulatifomu lekhasi lokufika kwe-Instapage:
Izici Zeplatifomu Yokufika
Isakhi esenziwe ngezifiso ngokuphelele se-Instapage senza amabhizinisi akwazi ukudala amakhasi amahle afika lapho efika khona. Ngokuhlelwa kwezakhi zomongo, amafonti angaphezu kuka-5,000 33, nezithombe eziyizigidi ezingama-XNUMX ezizosebenzisana nazo, umakhi wekhasi lokufika we-Instapage ukhipha ubuhlungu ekukhiqizeni amakhasi okufika afika kuhlobo lomkhiqizo, aguquguqukayo. Izici zifaka:
Izakhiwo Zesifanekiso Ngokususelwa Kwimboni Yemboni Nokusetshenziswa - izifanekiso ezingama-200 + ezenziwe ngezifiso ngokugcwele nezenziwe kahle zenzelwe ukwandisa ukuguqulwa kwakho.
Ukubambisana ekhasini elibonwayo - Hlanganyela ngqo nabalingani beqembu kanye namakhasimende ngesikhathi sangempela ukwenza lula inqubo yokubuyekeza idizayini. Yenza amakhasi akho adalwe, abuyekezwe, ashicilelwe, futhi aguqulwe ngokushesha.
Ifomu Builder - Faka amafomu enziwa ngezifiso anezinkambu eziningi, uhlu olwehliswayo, noma izinkinobho zomsakazo ngokuchofoza okumbalwa nje. Qoqa kalula imininingwane eyengeziwe kusuka ekulindeni kwakho ngokuguqula amafomu anzima abe yizinyathelo eziningi. Nciphisa amaphuzu wokushayisana futhi uthole abasebenzisi ukuthi bahlanganyele nomkhiqizo wakho.
Ukuphathwa koPhambili - Gcina, ukudlula, ukuthekelisa, noma ukuhola komzila ku-Instapage noma ukuhlanganisa bese ukuhambisa ku-CRM yakho noma okunye ukuhlanganiswa. Thola i-imeyili nesaziso sedeshibhodi lapho wenza imikhondo emisha.
Imilayezo Yokuqinisekisa - Yenza ngokwezifiso umyalezo wokuqinisekisa ovela lapho izivakashi zigcwalisa ifomu lakho.
Ngiyabonga & Amakhasi Wokuqinisekisa - Vumela ababhalisile bakho abasha bazi ukuthi uyayithokozela intshisekelo yabo ngemuva kokuthi sebethumele imininingwane yabo kwifomu lakho lokungena nekhasi lokubonga eliku-brand.
Ukulethwa Kwempahla Yedijithali - Zisindise isinyathelo ngokusetha uhlelo lokulethwa kwempahla oluzenzakalelayo. Ngokuchofoza okumbalwa ungaqinisekisa ukuthi lapho abahola phambili bakho bengenela ukunikezwa, kwenziwa kutholakale kubo ukuze bakulande ngokushesha.
I-Instablocks - Ngokushesha yakha amakhulukhulu amakhasi wokufika owenziwe ngezifiso ngokusebenzisa amabhlogo wekhasi ngalinye ongawenza ngezifiso, ulondoloze, futhi uphinde uwasebenzise. Khetha kokukhethiwe kwamathempulethi we-block aklanywe ngaphambilini, njengezihloko, onyaweni, ubufakazi, nokuningi, noma dala amabhlogo akho wangokwezifiso kusuka ekuqaleni.
Umsindo - Ngeza kalula izingqimba zokusebenza kumakhasi akho okufika ngamawijethi.
Amabhulokhi Eselula - Khiqiza amakhasi okufika aphendulayo aphathekayo ngokuchofoza okukodwa. Ukwenza ngokwezifiso okuqhubekayo, ungafihla amabhlogo wamakhasi wokubukwa kweselula ukuze wakhe isipiliyoni sokuphequlula esifanelekile. Khulisa ukuguqulwa ngokwakha umuzwa ofanele weselula wezivakashi zakho, ngaphandle kokusebenzisa unjiniyela.
Global Blocks - Phatha izifanekiso zomhlaba ngokuzikhandla ukuze uqinisekise ukuthi wonke amakhasi ahambisana nomkhiqizo. Yakha ama-Instablocks wangokwezifiso, ku-brand afana nonhlokweni, unyaweni, noma amabhulokhi womkhiqizo ongawasebenzisa kumakhulu noma izinkulungwane zamakhasi. Ngemuva kwalokho, hlela ibhulokhi kanye bese izinguquko zakho ziboniswa kuwo wonke amakhasi lapho kuvela khona ibhulokhi.
Phuma Kwizigelekeqe Zokuhlwaya Namafomu Okuthwebula Wokuhola - Dala izigelekeqe ezenziwe ngezifiso ngokususelwe kuzimbangela ezithile nge- OptinMonster, umhlinzeki oholayo wesoftup pop-aim popup, ukukhulisa amazinga wokuguqulwa emakhasini akho okufika.
Amafonti ngokwezifiso (Google & Typekit) - Amafonti ngokwezifiso akuvumela ukuthi ubonise ubunikazi bomkhiqizo wakho. I-Instapage iyona kuphela ipulatifomu enikezela ukufinyelela kuma-Webfonts we-premium we-5,000 + cishe izikhathi ezingaphezu kwezingu-100 ukukhetha ifonti kunanoma iyiphi enye isoftware yekhasi lokufika emakethe.
Umphathi Wefa Lesithombe - Faka futhi uhlele izithombe zakho ku-Instapage landing page design ithuluzi ukuze uqhubeke nokwenza ngezifiso iphromoshini yakho noma okunikezwayo.
Ukuhlolwa Kokwehlukaniswa Kweqiniso kwe-A / B Kweseva - Lungiselela amakhasi akho okufika ukuguqulwa ngamakhono wokuhlola we-A / B kuwo womabili amakhasi ethu ajwayelekile okufika namakhasi e-AMP. Landelela ukusebenza kwezivakashi, ukuhluka kovivinyo ngezinto ezintsha, izakhiwo, kanye / noma amadizayini, futhi wandise amazinga akho wokuguqulwa.
Amakhasi Wokufika we-AMP - Yakha amakhasi eselula alayisha khona manjalo, dala isipiliyoni sokuphequlula esingcono, bese ushayela ukuguqulwa okuningi ngamakhasi okufika anikwe amandla yi-Google AMP I-Instapage kuphela komakhi ekuvumela ukuthi udale futhi uhlole i-A / B amakhasi wokufika usebenzisa uhlaka lwe-AMP, akudingeki umthuthukisi.
Ukulayishwa Kwesifanekiso Nokulanda - Ngokushesha futhi kalula ulayishe izifanekiso kusuka I-ThemeForest (noma zenzele owakho ekuqaleni). Landa ukuze wabelane ngezinklamo zakho zekhasi lokufika nezwe.
Bhala ngaphezulu ukuvikelwa - Thuthukisa ukukhiqiza nokuhleleka kokuhamba komsebenzi ngokuvimbela abasebenzisi ukuthi bangabhali ngaphezulu komsebenzi womunye nomunye.
I-Versioning - Buyisela izinhlobo zangaphambilini zekhasi lokufika lokuthula kwengqondo lapho udala, udizayina noma uhlela.
Amamephu okushisa - Ama-Heatmaps ahlinzeka ngemininingwane enemininingwane yokuthi izivakashi zakho zisebenzisana kanjani namakhasi akho okufika. Lokhu kukwazisa kangcono ukuthi iziphi izinto zekhasi ezivivinyweni lwe-A / B.
Izibalo zokuguqulwa - Hlanganisa ngqo ne-Google AdWords ne-Analytics ukuthola okulula futhi wenze izindleko zesikhathi sangempela-ngesivakashi ngasinye nezindleko zokuhola ngakunye zibonakale ngqo endaweni yesikhulumi se-Instapage. Ngemuva kwalokho, dlulisa imethadatha eholayo iye kwi-CRM yakho noma uhlelo lokuzenzekelayo lokumaketha.
Ukulandela ngomkhondo i-Pixel Tracking - Sebenzisa ukulandela ngomkhondo kwe-pixel yokulandela ngomkhondo ukulandela ukuguqulwa kwangaphandle noma ukuphindisela emuva izivakashi ezingaguquki ekhasini lakho lokufika.
Ukuqoqwa Kwekhasi Lokulawulwa Komkhankaso - I-Instapage yenze lula ukuphathwa komkhankaso ngakho-ke abathengisi be-PPC bangakha ngokushesha amaqembu ezikhangiso eziteshini zabo zezikhangiso ezihlukile, imikhiqizo, izici, kanye nenani labantu.
Imibiko Yesikhathi Sangempela - Thola idatha yesikhathi sangempela, nganoma yisiphi isikhathi, kuwo wonke amadivayisi wakho, nganoma isiphi isikhathi.
Ukwenza okuthandwa nguwe - Dala ngokushesha i-1 eyingqayizivele 1: XNUMX ad-to-page post-chofoza ukufika kokuhlangenwe nakho kwekhasi kuzo zonke izethameli nge-Experience Manager. Thokozisa amakhasimende akho ngokuhlangenwe nakho kwekhasi okuzokusiza ukuthi ukwandise ukuguqulwa, ukwandise ukukhangisa kwe-digital ROI, futhi wehlise izindleko zokutholwa.
Ukuhlanganiswa - Hlanganisa kalula i-Instapage nokukhangisa okusetshenziswa kakhulu, okuvela eceleni, ama-analytics, i-CRM, ukumaketha nge-imeyili, kanye namapulatifomu wokumaketha wokuzenzekelayo.
Izici Zepulatifomu Le-Agency Landing Page Faka
Kwe-Pay Per Click (PPC) kanye nama-ejensi wokukhangisa, i-Instapage nayo iyisixazululo se-Agency esifanele. Izici zama-ejensi zifaka:
Ama-Akhawunti Omkhulu - Phatha kalula ama-akhawunti amaklayenti amaningi ngokushintsha phakathi kwama-akhawunti akho ngaphandle kokungena ngemvume kuma-akhawunti ahlukene. Buka uhlu lwama-akhawunti okwazi ukufinyelela kuwo, shintshela ku-akhawunti ofuna ukusebenzela kuyo, bese ubheka imininingwane ye-akhawunti / yomnikazi we-akhawunti okwamanje ophakathi kwesixhumi esibonakalayo esisodwa esihlanganisiwe.
Izindawo Zokusebenzela Ezizimele Zamaklayenti - Hlela izindawo zokusebenza zeqembu, uphathe kangcono ukusebenzisana kweqembu, futhi ugcine ubumfihlo beklayenti ngokumema amalungu eqembu ezindaweni ezithile zokusebenza. Unganikeza ngokushesha ukufinyelela kuzizinda zokushicilela ezindaweni ezithile zokusebenza, uphathe ukuhlanganiswa okwenziwe ngokwezifiso futhi, ushicilele ngokuphepha kwi-CMS yangaphandle ngohlelo lwethokheni.
Izimvume Zelungu Leqembu - Ukwabelana ngomsebenzi wakho neqembu noma amaklayenti akusasho ukudlulisa imininingwane yakho yokungena ngemvume. Nge-Instapage, unganikeza kalula ukufinyelela kokufunda kuphela kumalungu weqembu elifanele noma ababambiqhaza, ngamakhasi afanele okufika.
Ukushicilela Ezizindeni Ezingenamkhawulo - Ngokungafani namanye amapulatifomu wekhasi lokufika, i-Instapage ikuvumela ukuthi ushicilele amakhasi ezizindeni eziningi eziyingqayizivele ezinhlelweni eziningi zokuphathwa kokuqukethwe.
Cela i-Instapage Demo
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo ze Ukufaka, I-Themeforest, Futhi OptinMonster lapha.
Tags: ikhasi lokufika kwesikhangisoipulatifomu yekhasi lokufika kwe-ejensiikhasi lokufika lomkhankasoizibalo zokuguqulwaifomu builderi-google adwordsUkufakaUkuhlanganiswaikhasi lokufikaumakhi wekhasi lokufikaizibonelo zekhasi lokufikaamafomu ekhasi lokufikaukwenziwa kwekhasi lokungenaipulatifomu lekhasi lokufikaukuhola phambiliamafomu wokubamba wokuholaokuzivelelayoppc
I-GTranslate: I-plugin elula ye-WordPress Translation Esebenzisa i-Google Translate
Izinsiza ze-Design Design: Iseluleko, Okulandwayo, i-Infographics, kanye Nemikhuba Emisha